XOG BUUXDA: Maxaa ka jira in Kheyre Musharax yahay oo Farmaajo isku Khilaafeen? – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 25th February 2019 059
Laba sano ayaa u buuxsantay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre, iyadoo aan marnaba la maqal khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo Madaxweyne Farmaajo oo xilli hore meelo fagaare ah uga faanay sida ay u wada shaqeeyaan Ra’iisul Wasaarihiisa.
Hadal-heyn badan ayey dhalisay waxyaabaha isku haya labada mas’uul iyo sababta ay uga duwan yihiin mas’uuliyiintii ka horreeyay, balse shalay ayaa waxaa si lama filaan ah baraha bulshada waxaa ugu baahay ololeyaal abaabulan oo ka dhan ah Ra’iisul Wasaaraha laguna eedeynayo inuu Madaxweynaha khiyaamay, isla markaana uu isku diyaarinayo doorashada soo socota inuu Madaxweyne isku sharraxo.
Ololayaasha oo ay ka dhex muuqdeen dad bulshada saameyn ku dhex leh kuna dhow madaxweynaha siyaasad ahaan iyo beel ahaanba ayaa shaki badan abuuray oo bannaanka keenay su’aasha ah: Ma waxaa la gaaray xilligii khilaafka?
Ilo ku dhow dhow Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa xaqiijiyay in uusan jirin khilaaf soo kala dhex galay Farmaajo iyo Kheyre, isla markaana labada mas’uul aysan ka warqabin hadallada la isla dhex marayo, ilaha aan la xiriirna meesha kama saarin damaca u tartamidda Madaxweynenimo doorshada soo socota.
Sidoo kale waxaa la fahansan yahay in uusan weli jirin xisbi lagu dhawaaqay oo kulminaya Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, taas ayaana abuureysa shaki badan oo dhanka mustaqbalka siyaasadeed ee labada mas’uul.
Yaa ka dambeeyay ololaha?
Sida caadada ahayd siyaasiyiinta ku dhow Madaxweynaha iyo kuwa ay isku heybta yihiin waxa ay helaan qandraasyada ugu waa weyn oo ay Xukuumaddu bixiso, iyada oo intaa dheer tahay lacagaha siyaasadda lagu bixiyo xilliyada ay xasaraduhu jiraan, balse isbedelka maamul ee Kheyre uu la soo shirtagay uu qeyb ahaan Meesha ka saaray qandaraasyada nuucaan ah.
Siyaasiyiintan oo u badan xildhibaanno la heyb ah madaxweynaha ayaa dhowr jeer oo hore Madaxweynaha uga dacwooday ha-dhaqanka Ra’iisul Wasaaraha, hase ahaatee madaxweynuhu wuu ka gaabsaday, kadibna waxa ay billaabeen in ay Madaxweynaha ku eedeeyaan inuusan waxba kala socon maamulka dalka.
Xildhibaannadan oo ku milnaa abaabulka baraha bulshada ee dowladda ayaa fursad u arkay in ay xiriirkooda kaga faa’ideytaan mugdi gelinta xiriirka Farmaajo iyo Kheyre.
Sir ma aha in dowladda hadda jirta ay ku xooggan tahay warbaahinta, gaar ahaan baraha bulshada, waana arrinta caddeyn ku u noqon kara ka mid ahaanshaha ololihii ka dhanka ahaa Khayre.
Kheyre ma musharxbaa?
Ilaa iyo iminka ma jirto meel uu kaga dhawaaqay inuu musharrax yahay, haddana ma jirto meel uu ku caddeeyay inuusan is sharrixi doonin, laakiin sida dhaqanka siyaasadda ahaa waayihii u dambeeyay Ra’iisul Wasaare kastaa waxa uu isku soo sharaxayay Madaxweyne, arrinka Kheyre ayaa kaga duwanaan kara fursadda uu helay iyo sida uu u ad-adag yahay.
DAAWO: Madaxweynaha Puntland oo Jediyey Khudbaddii Ugu Dherayd Kana Hadlay Arima Culus
TOP NEWS: Maxkamadda Cadaaladda ICJ oo soomalia u ogollaatay in Maxkamadda ay geeyso Jawaabtii dacwada Badda
admin 13th February 2018 13th February 2018
Wasiirka Gaashaandhiga oo ka qaybgalay Shir dhanka Amaanka ah ”Sawiro”
admin 28th April 2015 27th August 2015
Ciidamo kale oo Magaladda Baladweyne la geyey.
admin 24th March 2015 27th August 2015